Okwu na-ele anya n'ihu - Sorrento Therapeutics
Nkwupụta Nlegharị Anya
Ozi enyere na webụsaịtị a gụnyere ozi na-atụ anya na nkwuputa na-atụ anya (mkpokọta, “nkwupụta na-ele anya n'ihu” n'ime nkọwa nke iwu nchekwa dị, gụnyere n'ime nkọwa nke “ọdụ ụgbọ mmiri dị mma” nke US Private Securities Litigation. Ndozigharị iwu nke 1995) metụtara Sorrento Therapeutics, Inc. ("Sorrento"). Okwu ndị na-ele anya n'ihu na-egosipụta atụmanya na nkwenye nke njikwa Sorrento gbasara mmemme n'ọdịnihu yana nwekwara ike gosipụta atụmatụ, ebumnuche, ebumnobi na ebumnuche njikwa Sorrento. Okwu ndị a na-ele anya n'ihu adịghị emetụta nke ọma na akụkọ ihe mere eme ma ọ bụ nke dị ugbu a na ha nwere ike soro ya na okwu ndị dị ka "ebumnobi," "atụ anya," "kwere," "nwere ike," "atụ," "atụ anya," "amụma, " "ebumnobi," "nwere ike," "atụmatụ," "nwere ike," "ekwe omume," "uche" na okwu ndị ọzọ na okwu ndị yiri ya. Okwu ndị a metụtara, n'etiti ihe ndị ọzọ, atụmanya nchịkwa nke Sorrento gbasara atụmatụ, ebumnuche, atụmatụ, ịrụ ọrụ n'ọdịnihu ma ọ bụ ịrụ ọrụ ego, atụmatụ azụmahịa na atụmanya, na atụmanya gbasara ule ụlọ ọgwụ, oge mmepe, mkparịta ụka na ndị isi nchịkwa, mmemme mmepe, ndị na-emepe emepe na ndị na-emepe emepe. ọgwụ nyocha n'okpuru mmepe nke Sorrento yana ndị mmekọ stratejik Sorrento. Okwu ndị a na-ele anya na webụsaịtị a abụghị nkwa ma ọ bụ nkwa, na ị gaghị etinye ntụkwasị obi na-enweghị isi na nkwupụta ndị a na-atụ anya n'ihi na ha gụnyere ihe ize ndụ ndị ama ama na ndị a na-amaghị, ihe ejighị n'aka na ihe ndị ọzọ, ọtụtụ n'ime ha karịrị ike Sorrento na nke nwere ike. mee ka nsonaazụ n'ezie dị iche n'ụzọ anụ ahụ na nke nkwupụta ndị a na-atụ anya egosipụtara ma ọ bụ gosipụtara. Ihe ize ndụ ndị dị otú ahụ na ejighị n'aka na-agụnye, ma ọnweghị oke na, mmetụta nke ọnọdụ akụ na ụba n'ozuzu, ọnọdụ akụ na ụba na ụlọ ọrụ biopharmaceutical, mgbanwe na gburugburu ebe obibi na-achịkwa, mgbanwe ahịa ngwaahịa, mgbanwe nke ụgwọ, ikike anyị ịzụlite na ichebe ikike ọgụgụ isi anyị. rụọ ọrụ azụmahịa anyị na-emebighị ikike ikike ọgụgụ isi nke ndị ọzọ, ịdabere na ndị ọzọ na / ma ọ bụ nkwekọrịta nkwekọrịta maka mmepe na-aga nke ọma na ịzụ ahịa ngwaahịa anyị, mgbanwe na mpaghara asọmpi, mgbanwe na ọkọlọtọ nlekọta maka ihe ngosi dị iche iche nke Sorrento. na-etinye aka na ihe egwu ndị ọzọ akọwapụtara na akụkọ kwa afọ nke Sorrento na Ụdị 10-K, yana ntinye akwụkwọ ndị ọzọ na-esote nke emere site n'oge ruo n'oge na US Securities and Exchange Commission, nke dị na www.sec.gov. Ihe ize ndụ ndị a na ejighị n'aka nwere ike ime ka nsonaazụ, arụmọrụ ma ọ bụ mmezu dị iche n'ụzọ anụ ahụ site na nsonaazụ, arụmọrụ ma ọ bụ mmezu nke egosipụtara ma ọ bụ gosipụtara site na nkwupụta ndị na-atụ anya. Nsonaazụ dị otú ahụ, arụmọrụ ma ọ bụ mmezu na-agụnye, mana ọnweghị oke na, oge ntinye aha ma ọ bụ imecha ule ụlọ ọgwụ, nsonaazụ nke ule ụlọ ọgwụ, oge na mmetụta nke usoro nhazi, ihe ịga nke ọma ma ọ bụ enweghị ihe ịga nke ọma na ịzụlite na inweta. Nkwenye usoro iwu nke ndị na-achọ ngwaahịa Sorrento, ihe ịga nke ọma, nrụpụta ma ọ bụ nchekwa nke onye ọ bụla n'ime ndị na-achọ ngwaahịa Sorrento, ikike ịkwalite, ịmepụta na imepụta usoro mmepụta ihe zuru oke, ụlọ ọgwụ ma ọ bụ ịzụ ahịa nke ndị na-achọ ngwaahịa Sorrento, yana ihe ịga nke ọma ma ọ bụ enweghị ya. nke ịga nke ọma n'ahịa nnabata nke ọ bụla n'ime ndị na-achọ ngwaahịa Sorrento. Mmepe ọgwụ ọjọọ na ịzụ ahịa na-agụnye nnukwu ihe ize ndụ, na naanị obere ọnụ ọgụgụ nke nyocha na mmemme mmepe na-ebute azụmahịa nke ngwaahịa. Nsonaazụ dị na nnwale ụlọ ọgwụ n'oge nwere ike ọ gaghị egosi nsonaazụ zuru oke ma ọ bụ nsonaazụ sitere na ọkwa ikpeazụ ma ọ bụ nnwale ụlọ ọgwụ buru ibu ma ghara ịhụ na nnabata usoro iwu.
Na webụsaịtị a, njikwa Sorrento nwere ike na-ezo aka na nsonaazụ, ntule ma ọ bụ usoro ịrụ ọrụ na-akwadoghị dịka ụkpụrụ US Generally Accepted Accounting Principles (“GAAP”) siri dị ka akọọrọ na ntinye akwụkwọ SEC nke ụlọ ọrụ ahụ. Nsonaazụ ndị a, ntule ma ọ bụ usoro arụmọrụ abụghị usoro GAAP na ebughị n'obi iji dochie ma ọ bụ dochie nsonaazụ a tụrụ n'okpuru GAAP yana mgbakwunye na nsonaazụ GAAP kọrọ.
Nkwupụta ndị a na-atụ anya na-ekwu naanị dị ka ụbọchị emere ma ọ bụ melite ha na webụsaịtị a, ma Sorrento na-ekwupụta ebumnuche ọ bụla, ọrụ, ọrụ ma ọ bụ nkwa ọ bụla iji degharịa ma ọ bụ melite nkwupụta atụmanya dị na webụsaịtị a.